EGİAD Trade Bridge Unites Business World | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirEGİAD Trade Unites Business
07 / 01 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, Warqad Hordhac ah, TURKEY
EGİAD Bridge Bridge wuxuu sii wadaa inuu tusaale u noqdo adduunka ganacsiga. Kaqeybgalka munaasabaddan, oo loo sameeyay in la dhiso lana ballaariyo Shabakadaha Ganacsiga, oo ah mid ka mid ah himilooyinkii aasaasiga ahaa ee xubnaha ka ahaa EGİAD - Aegean Youth Business Association, ayaa sare u kacay sanadkan. Maareeyayaal da 'yarta ah iyo Ururka Ganacsatada Dadka GYİAD ayaa ka soo qaybgalay ururkan oo loo qabtay EGİAD markii 7aad.
EGİAD'lı ganacsatada da 'yarta ah ee hadafkoodu yahay inay la kulmaan oo ay dhaqan geliyaan dhaqamada saxda ah ee shabakada ganacsiga, ayaa isugu yimid munaasabada' Buundada 7aad ee Ganacsiga ee EGİAD '. ururada si weyn qayb ecosystem ganacsi-abuurka ee Turkey ahaa ayaa ku dhow inay 100 wakiillo ganacsiga ka qeyb galay. Turkey ayaa keentay ururo aan dowli dunida ganacsiga iyo isu keentaa dhacdooyinka ka dhacay Xarunta Cultural Khan. kulan halkaas oo uu kula kulmay kasta oo dunida ganacsiga iyo in la dhiso xiriir ganacsi, waxa uu ahaa tusaale u ah dhammaan ururada bulshada rayidka ah ee Turkiga. Si loo dhiso loona ballaariyo Shabakadaha Ganacsiga, oo ah midda ugu weyn ee laga filayo xubnaha EGİAD, ururka loo yaqaan 'Network Speed ​​Networking Hızlı' oo cinwaankiisu yahay "EGİAD Trade Bridge dı" ayaa abuuray aagagga xiriir ganacsi oo badan iyo iskaashi. Iyada oo ay ka soo qaybgaleen xubno ka socda magaalada GYİAD ee fadhigeedu yahay Istanbul sanadkan, saameynta ururka ayaa laga dareemay gobollada. Kulanku, EGİAD wuxuu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay horumarinta xiriirka ganacsi iyo maalgashiga ee ka dhexeeya xubnaha iyo shirkadaha kale ee ganacsiga.
Madaxweynaha EGİAD Mustafa Aslan, oo khudbaddii furitaanka ka jeediyay hay'adda, ayaa tilmaamay in tartannada iyo moodooyinka ganacsiga ay si dhakhso leh isu beddelayaan isla markaana nidaamyada cusub iyo kuwa hal-abuurka lehba ay u wareegayaan dhinacyo kala duwan maalin kasta oo dhaafo. Aslan wuxuu yidhi, günümüzde Dunida maanta oo shabakadaha bulshada badanaa loogu wareejiyo warbaahinta dijitaalka, awooda iyo saameynta isgaarsiinta tooska ah wali waa mid aad muhiim u ah. Maanta, ganacsade iyo maal gashade la'aan shabakad wanaagsan kuma noolaan karo nolosha ganacsiga. Raasamaal bulsheed waa mid kamid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee xiriiriyaha. Maxaan ku sameyn karaa raasamaalkayga bulsheed, albaabheehee ayaan furi karaa? Yaan ku jiraa? Yaa i garanaya Jawaabta dhammaan su'aalahan waxay u oggolaaneysaa qof inuu si cad u arko xaaladda hadda jirta. Ganacsade leh xiriir xoog leh wuxuu noqon karaa mid aad waxtar u leh wuxuuna taageero ka heli karaa xiriirada uu la leeyahay markasta oo uu u baahdo. Si kastaba ha noqotee, arrinta ugu muhiimsan waa in la hubiyo in shabakad diyaar u tahay goorta taageerada loo baahan yahay. Tan darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso, la horumariyo oo la noolaado dadka kahor intaysan u baahnayn. Halkaas ayaan ku nimid. Halkan waxaan ku soo qaadaneynaa adduunka ganacsiga, waxaan abuurnaa shabakad oo waxaan u diyaarinnaa waqtiga ay midba midka kale u baahan yihiin. Waxaan aragnaa isku xirkayaga, shabakadaha ganacsiga, isbarashooyinka guud si aad u cad. Tani waxay ku tusaysaa sida muhiim u ah xiriirinta shabakaddu. Waxaan u baahan nahay inaan ku darno faahfaahin muhiim ah halkan. Markaad baarto guulahaagii hore iyo guul darrooyinki hore, waxaad si cad u arkeysaa saameynta dadka kugu xeeran. Haddii aan rabno iyo haddii kaleba, deegaankeenna wuxuu saameeyaa labadaba guul iyo tayada nolosha. Sidaa darteed, cidda aan naqaanno, cidda aan ku xirno waa mid aad muhiim u ah. Dareen ahaan, waxaan dareemayaa inaan aad ugu faraxsanahay oo aan nasiib u yeeshay maanta inaan kula joogo, xubno ka tirsan EGİAD iyo GYİAD. ”
Iyada oo ah ururkii aan dawliga ahayn ee ugu horreeyay ee adeegsanaya nidaamka isku xirka xawaaraha Speed ​​kaas oo ay si dhaw ula socoto Dunida isla markaana samaysanaya shabakadda 'Trade Bridge network si wax ku ool ah', EGİAD ayaa mar labaad la saxeexday. Iyada oo nidaamka this waxa ay noqotay mid baahsan ee dalka Turkiga la initiative EGIAD shabakadaha ganacsiga ballaadhiyey, fursadaha ganacsiga maanta halkaas tartanka waa maalin kasta baxsadeen oo dheeraad ah ayaa loo noqdo kuwo intan ka arki karo. Mid ka mid ah yoolalka xiga ayaa ahaa in la dhiso buundada ganacsiga oo hoos timaad hay'ad ay ku jiraan maal-gashadayaal shisheeye iyo dad ganacsato ah.
Waa maxay Buundada Ganacsi ee EGİAD?
Waxqabadka ugufiican waqtiga yar
Munaasabadda, kaqeybgalayaashu waa la dhaqaajiyey isla waqtigaas oo daqiiqado yar la socday waxaana loogu talagalay in dadka intooda ugu badan ay kulmaan midba midka kale xirfad ahaan waqti xadidan. Wadahadallada, oo lagu qeexay inay yihiin khudbad kor u qaad ah, qodobbada ugu muhiimsan ee shirkadda ayaa lagu sharxay. Dhaqankan, kaas oo salka ku haya mabda'a awood u leh inuu u sheego ganacsigooda waqti aad u yar isla markaana weydiiya su’aalaha saxda ah kooxda kale, waxaa looga golleeyahay in la kordhiyo wada shaqeynta ka dhexeysa xubnaha ganacsatada.
Bay Bridge oo ku biiray laba dhinac (Video)
EGİFED Gudiga Agaasimayaasha Waxay qiimeeyeen Dhaqaalaha 2019
EGİAD Kubbadda Sanadka Cusub
Tababaraha Xawaaraha Sare wuxuu isku daraa kooxda 42 Football
Taageero ka socota Qaybaha Ganacsiga ee Daaruse Bridge
Buundada Ganacsiga EGİAD
EGE Dhallin-yarada Ganacsiga Yaryar
Ururka dhalinyarada iyo ganacsiga